Babu Ram Dawadi's Blog: मैले राजश्व छलेकै हो त दसैं-२०७० मा?
हेर्नुस त मोटर-स्कुटरको गोदाम जस्तो न्यूरोडमा। ठाउं नभएर बिच रोडमै छोडिदिएका छन। कहां राखुं खै मेरो बाईक। “रोडमा नराखनुस है ट्राफिकले लान्छ” भन्दै छ पैसा मात्र अशुल्ने सुरक्षा नदिने पार्किङ् शुल्क संकलक। हेलमेटको सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने रे। बाईकको लेग गार्डलाई टेकायोकि दस रुपैंया ठेक्यो। झोलामा हालौं अट्दैन, बाईकमा डिक्कि छैन। अखिरि हेलमेट पनि बोकेरै हिंड्नु पर्ने भयो। सुन चांदि पसलको ठ्याक्कै अगाडि बल्ल खालि भयो ठाउं। लौ बाईक त राखियो पहिला यो चांदि पसलबाटै सुरु गरौं त सपिङ् भन्ने पो लाग्यो त। दसैंमा टिका लगाउन टिका-जमरा राख्ने प्यालारे सारै राम्रो। खल्ति छामेर मुल्य पनि सोधियो। “२९ हजार चार सय मात्रै” भन्नु भयो पसलकि बहिनेले त। वहांको व्याक्यम्समा “मात्रै” भन्ने शव्दले मलाई कता कता नयां-पुरानो जागिरमा हुंदा करपस्न त आवश्यकै रहेछ जस्तो पो लागयो त बाबै।करप्सन-लेस जिन्दगि बिताउने भनेर ईन्जिनियर भएपनि पून: शैक्षिक पेशालाई रोजेको त जिन्दगीको दौडान महङ्गो होला जस्तो छ। कम्तिमा दुई महिना जागिर त खानै पर्ने पो भयो यो मन परेको चिज लिनलाई। उक्त चांदिको प्याला किनेर तुरुन्तै घर फर्कने कुरा पनि त भएन नि। त्यसैले नकिन्ने निर्णय गरें। त्यति रकमले त धरै समान दिन भरि लगाएर पो किनमेल गर्नु छ त (अनि श्रिमतिलाई खुशि पार्नु छ दिनभरि सपिङ् गरियो भनेर)। श्रिमति पनि कम्ता वाठि परिनन र! आखिर कम्प्युटर ईन्जिनयर नै परिन (उहि पेशाकि) आफु जस्तै, फेरि अलि-अलि जागिरे पनि (आं गर्दा अलङ्कार)।
माथिको चित्रमा हर्नुस त! न्यूरोडको गल्लि र त्यसैमा राखिएको मसला पसल। गल्लिको चौडाई मुश्किलले सात-फुट होला। मसाला पसलमा भिड देख्दा लाग्छ ति पसलेले तुरुन्तै Wholesaler लाई फोन गर्नु पर्ने भयो (सामान सकियो तुरुन्त डेलिभरि गरिहाल)। बाटो छिचोल्न निकै धौ धौ छ। काठमाडौंको धुंवा-धुलो, गरिबि आदिले स्वास्थ्य नेपाली पाउन निकै मुश्किल छ। यि गल्लिहरुमा कस-कसले के कस्ता रोगहरु वोकेर हिंडेका छन के थाहा। धन्न नेपालिहरु!!! बांचेकै छन। आफ्नो आंखा त उहि श्रिमतिकै व्यागमा पो छ, कतैवाट अज्ञांत हात व्याग भित्र छिरिपो हाल्छकि भन्ने डर छ। यस्तो भिडमा आफ्नै ज्यानका कपडा जोगाउन त धौ धौ छ अनि व्याग त के! जे होस सहि-सलामत नै रहियो यसमा पनि।
मन लाग्यो यसो चश्मा पशलतिर पनि छिर्ने हो कि। श्रीमतिकि चिनेजानेका अंकल हुन (सहायद उनिले पहिले पनि यिनै अंकल संग लिने गर्थिन होला चश्मा-घडी यानेकि मेरो विहेभन्दा पनि पहिले) “एकदमै बलियो, राम्रो क्वालिटीको, राति पनि बाईक चलाउंदा लगाउन मिल्ने पोलराईज्ड ग्लास चाहियो अंकल”। चश्मा किन्दा किन्दा हैरान भइयो, अलि राम्रो क्वालिटिको है (मोर फोकस)। मरो लागि श्रिमतिले गरिन अनुरोद। सहायद उनको यो अनुरोध पहिलो चोटि भने हैन। बिहे भएपछि यो चौथो-पाचौं चोटि हुनु पर्छ। चश्मा कोरिने, भांचिने, हराउने आदि कारणले लगभग प्रत्यक छ महिनामा अंकललाई गुहार्नु पर्ने छ। अंकलको उत्तर आउंछ: “अनि नबिग्रिय,नभांचिय त मैले के खाने नि। पसल त चलाउनु पर्यो नि” (कुरो त ठकै हो)।१५ सय मुल्यको चश्मा अनुरोध गरेपछि बल्ल तल्ल एक हजारमा लिईयो २-सेट। दिनभरिको सपिङ पछि घर जाने वेला पनि भयो। आज कतिको सपिङ गरियो त? हिसाव गर्नु पर्यो भन्ने लाग्यो। iPhone को क्याल्कुलेटर खोलेर हिसाव-किताव शुरु त गरियो तर कुनै पनि बिल छैन। मारेन अव! मनमा लाग्यो मानौं यि सेवै व्यापारीका PAN/VAT त होलान नि। मेरो पनि PAN त छ। आजसम्म मैले गरेको part time जवहरुमा कसैले पनि मेरो PAN माग्दैनन केवल tax काटेको छु भन्छन। त्यो मेरो नामको ट्याक्स सरकारलाई तिर्छन-तिर्दैनन पत्तो छैन। फाइनानसियल म्याटर पर्यो तेति जानकारी छैन। मेरो कमाईको tax त मेरै प्यान मार्फत तिर्नु पर्ने हो जस्तो लाग्छ। Anyway, न्यूरोडका कुनै पनि व्यापरीले मलाई आजको सपिङको सामान्य बिल पनि उपलब्ध गराएनन। अचम्म भयो मलाई। सरकारले ति आयतित सामानको ट्याक्स कसरि लिन्छ? सरकार संग ति व्यापारीले भित्र्यायका सवै सामानहरुको रेकर्ड छ त? सामानहरु कहिले कुन मितिमा बिक्यो भन्ने विवरणको ट्रयाकिङ छ त? सरकारले ति सामानहरुको बजार भउ तोकेर ट्याक्स लिने गरेको छ त? १५ सय भनेको सामान १००० सम्ममा आउंदो रहेछ। अव ति पसलेले १५०० को ट्याक्स भर्लानकि १००० को भर्लान त? सवै प्रश्नहरु उत्तर बिहिन रहे।
अव सरकारले वेला-वेलामा टिभि-समाचारहरुमा “सामान किन्दा बिल लिन नभुल्नु” भन्ने सन्देश बजाको त सुनेकै हो। तर पनि एक छिन फुर्सद नहुने व्यापरीसंग बिल काट्ने फुर्सद पनि त हुनु पर्यो नि। अनि wait गरि-गरि बिल लिने धैर्यपनि त हुनु पर्यो नि म जस्ता पढेका भनौंदा हरु संग। पढेकाले त सरकारको अनुरोद वेवास्ता गर्छन भने धेरै प्रतिशत अनपढ रहेका नेपालिले कसरी मान्ने।
अव के गर्ने त? जनतालाई त अनुरोद मात्र गर्न सकिन्छ, तर बिल लिंदैनन त के गर्ने? जनता त करोडौं छन, संघ/संस्था/व्यापारी त करोडौं छैनन नि। यि संघ/संस्था/व्यापारीका सामान सहितको विवरण सरकारले राख्न सक्दैन र? के राजश्व छलि control गर्न सकिन्न र? बिल्कूल सकिन्छ। सरकार संग ईच्छा सक्ति हुनु पर्यो। corruption control, revenue bypass control र transparency maintain गर्ने मेकानिजम हुनु पर्यो। यानेकि मैले यस ब्लगको शुरु प्याराग्राफमा भनेको यहि हो कि “प्राविधिको सहि प्रयोग हुनु पर्यो”। ब्यापारीलाई राजश्व छल्न सक्ने मौका दिनु भएन। हुनत दूरसञ्चारको विजिनेस गर्छु भन्नेले त ग्राहकको विवरण राख्दैन अनि VoIP Call Bypass लाई प्रश्रय दिइनै राखेको छ र दोष लगाउंछ अरुलाई आफ्नो Revenue loss भयो भनेर। व्यापार गर्छ, कर्मचारिलाई पैसा बोनस बांड्छ अनि आफ्नै व्यापारमा भएको छलि रोक्न नसक्ने संस्थाहरु रहेको यो देशमा ति संस्थाहरुलाई विवरण राख्नु भनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हुतिहारा सरकारले न्यूरोडाका व्यापारीको विवरण के राख्न सक्थ्यो? र अनि राजश्व छलि नहुने त कुरै भएन। जे होस आर्को पटकवाट चाहिं बिल लिने कोशिष गर्ने छु, आजलाई माफ गर्नुहोला। सरकारको आंखा कहिं कतैवाट यो मेरो ब्लगमा परिहाल्यो भने “बिल नलियएको निहुंमा” मलाई corruption मा नहाल्न अनुरोद गर्छु है। तिनै व्यापरिलाई हाल्नुस corruption मा। करोडौं जनतालाई भन्दा थोरै व्यापारीलाई corruption मा हाल्न सजोलो होला कि। “घुष लिन्या र दिन्या दुबै देशका सत्रु हुन” तर घुष दिने भन्दा लिने थोरै हुने हुनाले होला अक्तियारले पनि सोहि बमोजिम गरेको। जय देश!!
२०७० को बडादसैं, तिहार एवं छटको उपलक्षमा सम्पूर्ण शुभ-चिन्तक तथा अशुभ-चिन्तकहरुमा शूभ-कामना अर्पण गर्न चाहन्छु।